Ciyaaraha Fudud ee Nairobi - BBC News Somali
Ciyaaraha Fudud ee Nairobi
31 Luulyo 2010
Image caption ciyaartoyda somalia
Tartanka horyaalka ciyaaraha fudud ee Africa oo haatan ka socda magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayaa waxaa ka qayb galaya koox ciyaartoy ah oo somali ah oo ka tagtay magaalada Muqdishu.
Xoghayaha xiriirka ciyaaraha fudud ee somalia,Farah Ali Macalin oo hoggaaminaya ciyaartoyda ayaa waxa uu sheegay in ciyaartoydaas ay yihiin afar wiil iyo gabadh, waxayna ka qayb gelayaa orodada dhexe iyo kuwa dhaadheer.
Ilaa iyo hadda ciyaartodaasi kuma gulaysan orodadaasi midna, waxana jirey hal wiil oo la sheegay inuu ka baaqday orodkii 800 mitir ka bacdi markii muruq lugta ah wax ka gaadheen.
Waxase la sheegay inay aad ugu hanweyn yihiin ciyaaraha soo socda inay kaalin fiican ka geli doonaan, ka rajo qabaan.
Shalayna waxa orodday gabadha ku jirta kooxdaasi orodka 1500 ee miti. In kasta oo ay kaalinta 8-daad gashay haddana waxa la sheegay inay dedaashay marka loo fiiriyo heerkeedii hore.
Farah Ali Macallin waxa uu intaasi ku daray rajada weyn ee ay qabaan kooxadaasi Somalidu inay u badan tahay orodada 1500 ee mitir iyo 5000 ee mitir oo laba wiil ordi doonaan.
Farah waxa uu sheegay in kooxdani in muddo aha ay ababarro ku qaadanayeen magaalada Muqdishu, laakiin waxa uu ka cawday duruufaha adag iyo xassilooni-darrada ka jirta halkaasi, iyo dhaqaale la'aan, kuwaasi oo wax weyn u dhimaya horumarintii ciyaaraha guud ahaan.